Nzira shanu dzekuronga rako rekuunganidza bhuku | Bezzia
Maria vazquez | 04/05/2021 12:00 | Musha
Avo vedu vanofarira kuverenga vanowanzo nyora pasi iwo mazita akamirira ekuverenga pane zvakanyorwa. Rondedzero inokura pamwero unotyisa watisingakwanise kurarama nawo. Hatitenge mazita ese ari pachinyorwa, kure nazvo, asi tinopedzisira taunganidzira kumba a kuunganidzwa kwakakosha kwemabhuku iwe unofanirwa kuronga neimwe nzira.
Iva neraibhurari mune yekugona kuisa ivo vese kurota kwevakawanda. Ichokwadi, zvisinei, chinotimanikidza kuti tigovagovera mumakamuri akasiyana. Kunyange zvakadaro chengetedza kurongeka mune yedu yekuunganidza Izvo zvinokwanisika nekushandisa imwe yemafomura mashanu atinofunga nhasi. Totanga here?
Mabhuku anowanzo gara munzvimbo dzakakodzera mudzimba medu, ndosaka kune vazhinji zvichikosha kuti nzira yekuronga nayo inopindura kune ese ari maviri maitiro uye ekushongedza. Kubatana nezviviri kwakaoma asi hazviite. Chero ipi nzira yaunosarudza kuzviita, iyi ndiyo yedu yekutanga kurudziro: chengetera shefu mune inodiwa nzvimbo yemabhuku achangosvika, iwo ausina kuverenga.
2 Mukurongeka kwemaarufabheti
5 Zvekunzwira tsitsi
Kana marudzi akasiyana achidyiwa mumba (zvinyorwa, ngano, nhoroondo, memoir, theatre, nhetembo), kuronga mabhuku zvinoenderana neichi chirevo inogara iri sarudzo inoshanda. Kana uchinge wakarongedzwa nemhando, mukuwedzera, kana huwandu hwemavhoriyamu hune rupo, iwe unogona kugara uchitsvaga gare gare kuti uarongedze nemavara orufabheti. Nzira mbiri dzekudzironga neidzo dzinoenderana nezvakanakira nekuipira.
Kuronga raibhurari muchidimbu ichiri imwe yesarudzo dzakakurumbira. Iwe unonyanya kuverenga fungidziro? Kana paine mhando iri pamusoro pebhuku rako rekuunganidza, unogona kuronga izvi muchitoro chikuru chemabhuku uchifunga nezvekutanga kwezita rekupedzisira revanyori. Iwe unogona nekudaro kuwana zviri nyore mabhuku emunyori wako waunofarira.
Iwe unowana zvichikuomera here kurangarira mazita uye vanyori vemabasa aunoverenga? Kana, seni, mwedzi miviri mushure mekuaverenga, zvinonetsa kuti iwe urangarire kunyange nharo, iyi inogona kunge isiri nzira yakanakira iwe. Mune yako uye yangu, imwe nzira yekuona inogona kuve inoshanda.
Kana iwe usiri kurangarira mazita kana vanyori asi kana iwe usingayeuke hunhu hwehunhu hwebhuku senge hukobvu, ruvara rwemuzongoza kana rwekuvhara, dzimwe nzira dzekuronga dzinoonekwa dzinogona kubatsira zvakanyanya. Kuzvimisikidza nemuparidzi, semuenzaniso, zvinogona kukubatsira iwe kuwana bhuku nekukurumidza.
Muzviitiko zvakawanda, zviri nyore kuziva kuti ndeupi muparidzi bhuku ndere kungotarisa kumusana. Iyo inozivikanwa kwazvo, semuenzaniso, iyo tsvuku yezvikamu zvePeriférica. Zvakare marangi eorenji kana matsvuku pane yakasviba musana weiyo Acantilado imba yekutsikisa kana iyo logo yeiyo Anagrama muunganidzwa.
Iyi nzira, pamusoro pekuita inoshanda, inotibvumidza kuronga raibhurari kuitira kuti mabhuku ane maitiro akafanana ave pamwechete. Tsika inotipa iyo maonero akarongeka uye anokwezvakazhinji kubva kuraibhurari yedu.
Maitiro ne yakawanda yekuvapo parizvino pa Instagram, netiweki umo zvese zvinoita kunge zvinochengetwa nemaziso, kuronga mabhuku nemara. Zvinoshanda? Kana, seni, uine ndangariro isinganzwisisike, inogona kunge yakareba sekuunganidzwa kwebhuku kuri kushoma.
Hatigone kufuratira kuti mabhuku ane mitsipa mitema nemachena ndiwo mazhinji. Ichokwadi kuti kune vaparidzi vakawanda, kunyanya vatsva uye / kana vanozvimiririra, vanobheja paruvara asi hazviwanzo kuwana, semuenzaniso, mabhuku ane ruvara rwepepuru kana girini, kupa mienzaniso mishoma. Saka kana iwo maonero echitoro chako chemabhuku ichave yakanaka asi pamwe isina kudzikama uye hapazove nezvakawanda zvaunogona kuita nezvazvo.
Wakafarira bhuku racho here? Ungazvikurudzira kune mumwe munhu here? Kunzwa uko munhu anako kwekumwe kuverenga yakawanda sei iwe yaunofanira kuidzosera kuraibhurari inogona kuita seyakafanira nzira yekumisikidza senge yapfuura. Wadii kuronga mabhuku ako muzvikamu zvitatu? Avo vaunoda kana kuverenga kwavo kwakakumaka iwe kune rumwe rutivi. Kune rimwe divi, iwo aunonakidzwa asi unongokurudzira kune vamwe vanhu. Uye pakupedzisira, izvo zvausina kufarira uye zvaunogona kutengesa kana kupa kune mumwe munhu anogona kunakidzwa nazvo.
Iwe unoshandisa chero nzira yekuronga yako kuunganidza bhuku?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Musha » Nzira shanu dzekuronga rako rekuunganidza bhuku